ကောင်လေးချောချောလေးတွေကို ကြည့်ခြင်းက အမျိုးသမီးတွေကို မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေ •
14/06/2019 lin htet Life Style 0
KBS ရုပ်သံလှိုင်းရဲ့ Discoveries in Life ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကနေ သူတို့ရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုကို ထုတ်ဖေါ်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်…..
အဒါကတော ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ အမျိုးသားတွေကို ကြည့်ခြင်းက ကျောင်းမှာ အမှတ်ကောင်းကောင်းရစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကိုတော့ သက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသမီးတွေနဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ….
အဲဒီအမျိုးသမီးတွေကို ၁မိနစ်အတွင်းမှာ လူနဲ့နာမည်တွေ မှတ်နိုင်သလောက် မှတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကောင်လေးချောချောလေးတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံကို ကြည့်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ဉာဏ်ပြန်လည်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့တွေ ၄ခုထက်ပိုတဲ့ အဖြေမှန်တွေကို ဖြေပေးနိုင်ပါတယ်….
ဒီလေ့လာမှုကတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဦးနှောက်လှိုင်းကို လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရုပ်ချောတဲ့ အမျိုးသားဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ ဦးနှော်က်လှိုင်းတွေက ပုံမှန်အချိန်ထက် သိသိသာသာ တက်ကြွနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြော လေ့လာတဲ့ ဌာနခေါင်းဆောင်ကလည်း ဒီအကြောင်းကို အတည်ပြုပေးခဲ့တာပါ ….
နောက် ထပ် ဆေး သိ ပ္ပံ ပ ညာ ရှင် တစ် ယောက် ရဲ့ အ ဆို အ ရ တော့ ရုပ် ရည် ချော မော တဲ့ အ မျိုး သား တွေ ရဲ့ ပုံကို ကြည့် ခြင်း က ဦး နှောက် အ ပေါ် မှာ ကောင်း မွန် တဲ့ အ ကျိုး သက် ရောက် မှု တွေ ရှိ တယ် လို့ သိ ရ ပါ တယ်…..
ဒါ ပေ မဲ့ အ မျိုး သား တွေ က ရုပ် ရည် လှ ပ တဲ့ အ မျိုး သ မီး တွေ ကို ကြည့် တဲ့ အ ခါ မှာ တော့ သူ တို ရဲ့ မှတ် ဉာဏ် က ဘာ တိုး တက် မှု မှ မ ရှိ တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ်။ ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ အ မျိုး သား တွေ က အာ ရုံထွေ ပြား တာ ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ် ….
ကောငျလေးခြောခြောလေးတှကေို ကွညျ့ခွငျးက အမြိုးသမီးတှကေို မှတျဉာဏျပိုကောငျးစေ
KBS ရုပျသံလှိုငျးရဲ့ Discoveries in Life ဆိုတဲ့ အစီအစဉျကနေ သူတို့ရဲ့ ရှာဖှတှေရှေိ့မှုတဈခုကို ထုတျဖျေါတငျဆကျခဲ့ပါတယျ…..
အဒါကတော ရုပျရညျခြောမောတဲ့ အမြိုးသားတှကေို ကွညျ့ခွငျးက ကြောငျးမှာ အမှတျကောငျးကောငျးရစနေိုငျတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးအရာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလလေ့ာမှုကိုတော့ သကျလတျပိုငျး အမြိုးသမီးတှနေဲ့ စမျးသပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ ….
အဲဒီအမြိုးသမီးတှကေို ၁မိနဈအတှငျးမှာ လူနဲ့နာမညျတှေ မှတျနိုငျသလောကျ မှတျခိုငျးခဲ့ပါတယျ။ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ ကောငျလေးခြောခြောလေးတှရေဲ့ ဓါတျပုံကို ကွညျ့ခိုငျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။မှတျဉာဏျပွနျလညျစဈဆေးတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့တှေ ၄ခုထကျပိုတဲ့ အဖွမှေနျတှကေို ဖွပေေးနိုငျပါတယျ….
ဒီလလေ့ာမှုကတော့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဦးနှောကျလှိုငျးကို လလေ့ာခဲ့တာဖွဈပွီး ရုပျခြောတဲ့ အမြိုးသားဓါတျပုံတှကေို ကွညျ့နတေဲ့အခြိနျမှာ ဦးနှျောကျလှိုငျးတှကေ ပုံမှနျအခြိနျထကျ သိသိသာသာ တကျကွှနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ ဦးနှောကျနဲ့ အာရုံကွော လလေ့ာတဲ့ ဌာနခေါငျးဆောငျကလညျး ဒီအကွောငျးကို အတညျပွုပေးခဲ့တာပါ ….
နောကျ ထပျ ဆေး သိ ပ်ပံ ပ ညာ ရှငျ တဈ ယောကျ ရဲ့ အ ဆို အ ရ တော့ ရုပျ ရညျ ခြော မော တဲ့ အ မြိုး သား တှေ ရဲ့ ပုံကို ကွညျ့ ခွငျး က ဦး နှောကျ အ ပျေါ မှာ ကောငျး မှနျ တဲ့ အ ကြိုး သကျ ရောကျ မှု တှေ ရှိ တယျ လို့ သိ ရ ပါ တယျ…..
ဒါ ပေ မဲ့ အ မြိုး သား တှေ က ရုပျ ရညျ လှ ပ တဲ့ အ မြိုး သ မီး တှေ ကို ကွညျ့ တဲ့ အ ခါ မှာ တော့ သူ တို ရဲ့ မှတျ ဉာဏျ က ဘာ တိုး တကျ မှု မှ မ ရှိ တာ ကို တှေ့ ရ ပါ တယျ။ ဘာ ကွောငျ့ လဲ ဆို တော့ အ မြိုး သား တှေ က အာ ရုံထှေ ပွား တာ ကွောငျ့ ဖွဈ ပါ တယျ ….